Madaxda DFS oo Aqbashay Inay Kaqayb Gasho Shirka Garoowe Iyo arin samyn weyn leh oo ka socota Garowe warar sheegaya…. - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Madaxda DFS oo Aqbashay Inay Kaqayb Gasho Shirka Garoowe Iyo arin samyn...
Madaxda DFS oo Aqbashay Inay Kaqayb Gasho Shirka Garoowe Iyo arin samyn weyn leh oo ka socota Garowe warar sheegaya….
Muqdisho (Banaadirsom)-Madaxweynaha soomoaliya maxamed cabdullahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa go’aamiyey in dowladda ay ka qeyb-gasho shirka uu ku baaqay madaxweyne Deni ee u dhaxeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada.
Shirkaas oo la cayimay labada bisha May, ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka arrinsanayey oo dood weyn uu ka dhex abuuray madaxda dowladda, oo marar badan ku fakaray inaysan ka qeyb galin.
Sababta ugu weyn ee dowladda uga laba labeeneysay ka qeyb-galka shirkaas ayaa ahayd in haddii ay ka qeyb galaan shirka Garoowe, ay u muuqan doonaan in siyaasad ahaan laga adkaaday, maadaama madax goboleedyada ay diideen shirkii uu Farmaajo ku baaqay ee Muqdisho.
Si kastaba, warar ay helayso Badweyntimes ayaa sheegaya in dowladda ay go’aamisay inay ka qeyb-galayso shirkaas, ayada oo sababta ugu weyn ay tahay cabsi ay ka qabto in haddii ay ka baaqato ay madax goboleedyada kusoo dhisaan dowladda isbahaysi cusub oo caqabad kale ku noqdo.
“Haddii inta aan ka baaqanno shirka, oo halkaas ibahaysi cusub lagu dhiso waa arrin dowladda aad u dhaawaceysa kadib dagalakii xoogganaa ee ay la gashay isbahaysigii hore” waxaa sidaas Caasimada Online u sheegay sarkaal ka tirsan Villa Somalia.
Isbahaysigii hore ee madax goboleedyada ayaa burburay kadib markii qaar ka mid ah madaxweynayaashii maamul goboleedyada ay xilka ka degeen halka qaar kalena ay la safteen dowladda